အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါ၏ ပရိတ်သတ်များအတွက်လျှို့ဝှက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပျော်စရာထိတွေ့မှုများပါ ၀ င်သည်။ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင်ဒီဇိုင်းဆွဲသူများကသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးနမူနာများကိုရွေးချယ်ကြသည်
အဘယ်သူမျှမထား The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art ဆောင်ပုဒ်ထက်ပိုမိုအသေးစိတ်နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နည်းနည်းထိအတူထုပ်ပိုးထားသည် 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!။ အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာ Justin Ramsden နှင့် Graphic Designer Paul Constantin တို့သည်ဤ 3,178 အပိုင်းအစမော်ဒယ်ကိုပြသခြင်းထက်ပိုမိုပြုလုပ်ရန်၎င်းတို့တွင်ပါဝင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျက်စတင်: ငါ bits တွေ bobs တွေဆောက်တာကိုတကယ်သဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့်ကားအင်ဂျင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကင်တစ်လုံးရှိတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ခွေးထဲမှာပါတဲ့လှံနဲ့အတူ hot dog - ညမှာငါတကယ်တကယ်လာပြီး 'တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလိမ့်မယ်' ငါနဲ့တူခဲ့တယ်။
Liberty ၏ရုပ်ထုအတွက်မျက်ခုံးများရှာဖွေရန်ကြိုးစားစဉ် 'ခွေးကောင်တွေဒီမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်' လို့စဉ်းစားမိသည်။ ဒြပ်စင်တွေရှာရုံပါပဲ classic Lego အရာ - စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာများရှာဖွေခြင်းနှင့်နည်းလမ်းသစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည် part အလုပ်၏ပျော်စရာ၏။ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ အီစတာကြက်ဥတွေများများစားစားဖုံးထားတယ် Lego ရုပ်ရှင်၊ တကယ့်ရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားဒီဇိုင်နာများကဲ့သို့သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းယူဆောင်လာလိမ့်မည်။
၂၁၃၁၁ Voltron တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ Niek van Slagmaat သည်သူသည်ဤရုပ်ရှင်၌ခေါ်ဝေါ်နေစဉ် Bad Cop (သို့မဟုတ်) Scribble Cop အတွက်ထိုင်ခုံများကိုကန်နေသည့်အရာကိုရှာဖွေသည်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်ကနေအရမ်းရယ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်အထင်ကရဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအတွက်တွန်းအားပေးချင်တယ်။ Bricksburg ကနေရထားအားလုံးဘာဖြစ်သွားသလဲ အခုဆိုရင်ဘယ်မှာအားကစားရုံဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါက Batman လေ့ကျင့်ရေးသွားနိုင်မလဲ? ကစားစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့သေးငယ်သောပျော်စရာကောင်းသောအရာများကိုထည့်ခြင်း။
ရှင်ပေါလု - ဒီတစ်ခုလုံးကိုအသေးစားပုံစံနဲ့သင်လုပ်ခဲ့တာ Lego ရုပ်ရှင်2အခင်းအကျင်း, သင်အကြိုက်ဆုံးရှိပါသလား
ရှင်ပေါလု: ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ Rex Dangervest ဖြစ်သည်။ သူကတော်တော်လတ်ဆတ်တယ်။ Rex Dangervest သည်သူကိုယ်တိုင်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သူ၏တံဆိပ်၊ တံဆိပ်၊ တံဆိပ်၊ dungaree အသေးစိတ်အချက်အလက်များ…သူသည်ဤကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ၏အမြင်အာရုံနှင့်အတူတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့သည်။
ဂျက်စတင်: အီစတာကြက်ဥထဲခိုးဖို့ပေါလ်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရတာ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာသူ Mike Patton နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်နှင်းလျှောစီးကိုအချက်ပြအမှတ်အသားများအဖြစ်နှစ်သက်ပါတယ် ငါအရမ်းပျော်တယ်လို့ထင်တယ် Statue of Liberty ခေါင်းပေါ်မှဆူးများသည်စိမ်းလန်းစိုပြည်သောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယူဆောင်လာခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါဖုံးကွယ်ဖို့ကိုချစ်တဲ့ပန်းကန်ရှိပါသည် Lego အဆိုပါ parmo, ဒါမှမဟုတ်ကြက်သား parmesan ဟုခေါ်တွင်အစုံ။ အင်္ဂလန်၏အရှေ့မြောက်ဒေသမှဒေသတွင်းဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်သည်။ ငါအနည်းငယ်ထဲမှာထားကြပြီ Lego ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ Mike Patton သည်ဒေသတစ်ခုတည်းမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ Apocalypseburg တွင်ဤကြီးမားသောပမာဏသည်ရှိရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရာနှင့်တူသည်။ ကြော်အလှတရား၏။ ဒါကြောင့်ငါတို့က menus တွေထဲကတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းတယ်။
ရှင်ပေါလု: ဒါ့အပြင် Batman အရာ။
ဂျက်စတင်: ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ Batmobile ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာပါ။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သောအရာအနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်သည်ယခင်ပုံစံတွင်ယခင်လုပ်ခဲ့ဖူးသောအင်ဂျင်တစ်ခု၏အင်ဂျင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်က set နဲ့ကစားတဲ့အခါအင်ဂျင်ကိုမင်းသိမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Milan Madge သည်ခုနစ်နှစ်အရွယ်တွင်ကုလားထိုင်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး MOC Pages တွင်တင်ခဲ့သည်။ သူကဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ၊ ပြီးတော့ကုလားထိုင်တစ်ချောင်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါ 'ငါတို့ဘာကြောင့်ဒီကိုမသုံးတာလဲ' ငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါတီထွင်ခဲ့တဲ့ Super Heroes အစုံတစ်ခုထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ ငါလည်းဒီမှာထည့်လိုက်တယ်။ အဘယ်သူသည်သိသည်, ကအနာဂတ်၌ဖွင့်လိမ့်မည် ...
သူသည် ဝင်၍ 'ဤတွင်အဘယ်သို့ပြုလျက်နေကြသနည်း' ဒါဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့တည်ဆောက်မှုတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာထိုင်ခုံရဲ့နောက်ကျောကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုထားလို့ပါ Lego ထိုင်ခုံ၏နောက်ကျောအတွက်ထိုင်ခုံ - ဤအရာသည်သိသာထင်ရှား။ ကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့သင်တည်ဆောက်မည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါတကယ်လတ်ဆတ်ပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါထိုင်ခုံကိုသူဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတာထက်ပိုပြီးထည့်ထားလို့သူကချစ်တယ်။
အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်! သီးသန့်မှာယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
ပိုပြီးနောက်ကွယ်မှ -The- မြင်ကွင်းများသည် Lego ရုပ်ရှင်2ထိုးထွင်းသိမြင်မှု, အမိန့် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ပြဿနာ 2, အရာ၌ Lego ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာများ Mauricio Bedolla နှင့် Ross Christopher Haynes တို့သည်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသည့်အယူအဆကိုဝေမျှကြသည် artနှင့်မော်ဒယ်ဒီဇိုင်နာနီကိုလတ်ဗတ်၏ခရီးစဉ်တစ်ခုပေးသည် 70831 Emmet ၏အိပ်မက်အိမ် / ကယ်ဆယ်ရေးဒုံးပျံ။ မဂ္ဂဇင်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည် တစ်ခုတည်းမိတ္တူ (ပေါင်းစာပို့ခနှင့်ထုပ်ပိုးမှုစသည်) သို့မဟုတ် p အဖြစ်art တစ်ဦး၏ 12- ပြissueနာ or 24- ပြissueနာ အခမဲ့စာပို့ခနှင့်ထုပ်ပိုးအတူလျှော့စျေးနှုန်းမှာစာရင်းပေးသွင်းခြင်း။
← LEGO DC Super-Villains အတွက် LEGO DC Movie Character Pack DLC ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Lego Star Wars 75236 Starkiller အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် Duel ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် →